Home TOROHEVITRA FOTOTRA EUROPEAN Edin Dzeko tantaram-pitiavana tantanin'ny tantaram-piainana tsy hita isa
Ny LB dia manolotra ny tantara manontolo momba ny lalao baolina kitra malaza amin'ny anarana; "Diamondra Bosniaka". Ny tantaran-tantaran'i Edin Dzeko momba ny tantaram-pianakaviana sy ny tantaram-piainan'ny tsy fantatra dia mitondra fitantarana feno momba ireo zava-nitranga mahatalanjona hatramin'ny fahazazany hatramin'izao. Ny fanadihadiana dia midika ny tantaram-piainany talohan'ny lazany, ny fiainam-pianakaviana ary ny ankamaroan'ny zavatra tsy fantatra sy tsy fantatra momba azy.
Eny, fantatry ny rehetra ny fahaiza-manaony, saingy vitsy no mieritreritra ny Bio's Edin Dzeko izay mahaliana. Amin'izao fotoana izao tsy misy adieu intsony, andao hanomboka.
Edin Dzeko Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Voalohandohan'ny fiainana
Edin Dzeko dia teraka tamin'ny andro 17 tamin'ny mars 1986 tany Sarajevo, Bosnia sy Herzegovina. Teraka tamin'ny reniny, Belma Džeko izy ary rain'i Midhat Džeko.
Ny tantaram-pitiavan'i Edin Džeko dia sangan'asa sy herim-po. Ity dia tantaranà tovolahy iray nandroaka ny bala afomanga mba hahatonga azy ho eo an-tampon'ilay baolina kitra. Raha tsy i Belma reniny, izay nanakana ny zanany kely kely tsy handeha hilalao baolina any an-kianja izay nipoaka baomba minitra vitsy taty aoriana, dia tsy ho nahita maso an'i Edin Džeko mihitsy ny handray ny saha na hitory ny fampitàm-baovao avy amin'ny Chelsea FC . Nitranga nandritra ny ady nandritra ny ady Balkana izany.
Miverina any amin'ny 1992, Ady amin'ny Fahaleovantena Bosniaka izay naharitra telo taona hatramin'ny 1995. Io no iray amin'ireo tranga mampihoron-koditra indrindra teo amin'ny tantaran'ny Balkans satria ny Serba sy Kroasia Bosniaka dia niady tamin'ny foko. Sarajevo, renivohitr'i Bosniaka sy Herzegovina ary ny tanàna homena an'i Edin Džeko dia iray amin'ireo toerana ratsy indrindra teo amin'ny ady. Niady mafy tamin'ny fiainana izy tamin'ny maha-zaza azy ary nanao azy io ho amin'ny anarana malaza amin'ny fiarahamonin'ny baolina kitra baolina kitra.
Edin Dzeko Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Relationship Life
Tamin'ny 31 March 2014 Džeko dia nanambady ny sipany Amra Silajdžić izay modely Bosniaka sy mpilalao sarimihetsika. Roa taona izy noho ny lehilahy.
Amra dia nanambady tanora iray mpandraharaha serba, Vladimir Vičijentijević, izay nanambady an'i Sofia tamin'ny 14 taona. Izy roa dia nahatsapa fa ny fisaraham-panambadiana tsara dia tsara noho ny fanambadiana ratsy ary ny rehetra dia nandeha.
Ny fihetsiky ny fitiavana Amre Silajdžić sy Edina Džeke dia nanomboka tamin'ny 2012 fony izy tany Manchester City. Herintaona no nilazany ny fifandraisan'izy ireo, nangina izy ireo, ary ny fifandraisana dia nambara tamin'ny alalan'ny fizarana sary tao amin'ny Twitter.
Tamin'ny Febroary 2016, dia lasa rain'ny ankizivavy antsoina hoe Una izy. Ny zanany faharoa, zazalahy iray antsoina hoe Dani, dia teraka tamin'ny Septambra 2017.
Edin Dzeko Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Fiainana ao amin'ny fianakaviana
Edin Dzeko dia nilaza fa ny fianakaviany dia nanohana foana azy nandritra ny asany, indrindra fa ny rainy, izay nitondra azy hampiofana fivoriana fony izy tany Željezničar.
Ny rainy ihany koa dia nilalao matihanina tany Bosnia sy Herzegovina. Džeko Snr dia heverina ho superstar tao Sarajevo.
anabaviny; Merima Džeko no sehatry ny rahavavin'i Edin Dzeko. Tsy ny zandriny fotsiny ihany, fa ny namanao akaiky indrindra amin'ny fahazazany koa, satria samy niara-nandany fotoana betsaka izy ireo rehefa nihalehibe.
Ity ambany ity dia fanehoana ny hoe i Edin sy Merima no tsara indrindra amin'ny pals.
Ny sary etsy ambony dia nentina tany Bosnia.
Edin Dzeko Childhood Story Plus Untold Biography Facts -toetra
Nahita an'i Edin Dzeko isika manana ireto toetra manaraka ireto amin'ny toetrany.
Edin Dzeko's Strengths: Izy dia fangorahana, artista, mahaliana, malefaka, hendry ary tena mozika.
Ny Fahalemen'i Edin Dzeko: Edin dia mety ho mahatahotra, matoky tena loatra, indraindray dia malahelo noho ny antony kely ary maniry ny handositra ny zava-misy.
Inona no tian'i Edin Dzeko: Ny maha-irery, ny torimaso, ny mozika, ny romance, ny haino aman-jery sy ny lohahevitra ara-panahy
Inona no tsy tiany nataon'i Edin Dzeko: Fantatra-ny rehetra, voatsikera, ny lasa dia niverina indray nanenjika azy sy ny halozàna rehetra tahaka izay hitany tany amin'ny ady tao Bosniaka.
Amin'ny ankapobeny, i Edin Dzeko dia tena sariaka ary matetika izy ireo dia miara-miasa amin'ny olona samy hafa. Tsy tia tena koa izy, vonona hanampy ny hafa foana, ary tsy manantena ny hahazo zavatra. Ny asany ara-pihetseham-po dia mamintina ny maha izy azy.
Edin Dzeko Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Manongana Shorts
I Edin Dzeko indray dia nitondra ny takolaka nalaim-panahy handroaka ny mason'ny mpifanandrina iray amin'ny fomba mahatsikaiky amin'ny lalao amin'ny firenena misy an'i Gresy izay nitranga tamin'ny taona 2016. Ny kapitenin'i Bosnia-Herzegovina dia nahita ny mena rehefa nalefa taty aoriana.
Ny zava-nitranga dia nitranga nandritra ny minitra farany tamin'ny 10 tamin'ny kalandrie'ny World Cup raha nitarika ny ekipan'i Dzeko 1-0. Nanomboka izany rehefa nilalao teo amin'ny fanamby tao Sokratis Papastathopoulos ny mpilalao Manchester Manchester teo aloha, izay any Roma ankehitriny, teo ivelan'ny sazin'ny sazin'ny fahavalony. Nalatsofina ny fividianana grika rehefa niezaka ny hitifitra ilay baolina avy amin'ny fahatakaran'i Dzeko izy, ka niteraka fifandonana teo amin'ny ankamaroan'ny mpilalao avy amin'ny andaniny sy ny ekipa teknika roa samy hafa.
Dzeko, izay efa nanana sari-tany mavo, dia navoakan'ny mpitsara, Jonas Eriksson, raha i Kyriakos Papadopoulos dia nomena mena mena mba hanosehana ny fifandonana taorian'ny zava-nitranga voalohany. Nandroso i Gresy mba handràra ny fotoana ifanaovan'ny ekipa roa miaraka amin'ny lehilahy 10.
"I nahazo karatra mena tsy misy antony, tsy kankehitriny ny antony," Nilaza i Dzeko taorian'izay. "Nilaza ilay mpitsara fa nanomboka ny zava-drehetra aho, fa izaho irery no niafara tamin'ny tany, ka ahoana no nahafahako nanomboka izany?
Hoy izy nanampy: "Mahatsiaro ho very 3-0 aho. Tsy mendrika an'io hevitra io i Gresy. Tsy mendrika ny famoanana 1-0 izy ireo, mendrika ny hamoy 4-0. "
Edin Dzeko Childhood Story Plus Untold Biography Facts -The Luggage Story
Izany dia nahatonga mpankafy maro hanodikodina ny fampiharana fandehanana an-dalamby sy ny fikarohana amin'ny seranam-piaramanidina mba hahafantarana raha toa i Edin Dzeko hita ho any Londres. Angamba, ny toerana nodiaviny, mba ho any amin'ny faritra Surrey, toerana iray ahafahantsika mahafantatra an'i Cobham, izay misy ny mpitsabo sy ny fisoratana anarana ho an'ny Chelsea Football Club. Ity no fantson'ny mediasina italiana an'i Italy izay namoaka ity lahatsoratra ity voalohany. Ny tatitra nataony dia manampy fa i Dzeko dia niaraka tamin'ny anabaviny, ary koa ny solontenany Silvano Martina.
Edin Dzeko Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Karohy amin'ny famintinana
Nanomboka ny asany i Džeko Željezničar, nilalao ho mpilalao midi-pandrefesana teo anelanelan'ny 2003 sy 2005, saingy tsy dia nahita fahombiazana nilalao tao amin'io toerana io. Heverina ho ambony loatra izy, ary nanana fahaizana teknika tsy mahomby. Ny mpanazatra an'i Džeko tamin'izany fotoana izany, Jiří Plíšek, dia nahita ny mety ho azy ary rehefa niverina tany an-trano i Plíšek, dia nanoro hevitra klioba hafa izy, Teplice hividy ny ankizilahy mahantra.
Željezničar dia nanaiky ny vidim-bidin'ny "25,000" fotsiny ho an'i Džeko, iray amin'ireo talen'ny zeljezničar milaza taona maro taty aoriana, "[Nieritreritra] izahay fa nahazo ny loteria". Nahazo trosa fampindramam-bola amin'ny Ústí nad Labem tao 2005 izy, izay nandrasany tanjona enina tao amin'ny lalao 15. Taty aoriana tamin'io taona io, dia niverina tany Teplice izy ary nijanona tao mandra-pahatongan'ny 2007. Miaraka amin'ny tanjona 13 ao amin'ny lalao 30, izy no laharam-pahamehana faharoa faharoa an'ny Ligy Czech tamin'ny 2006-07. Noho ny fampisehoana nataony, nanasonia azy ny mpanafika VfL Wolfsburg Felix Magath noho ny € 4 tapitrisa. Nahazo tanjona maro tao amin'ny klioba izy. Izany dia nahatonga ny anarany tao amin'ny lisitry ny fivarotana skoto voalohany.
Taorian'ny fanombantombanana mavesatra, Roberto Mancini, mpitantana ny Manchester City, dia nanamafy tamin'ny 3 January 2011 fa nanaiky ny vola 27 (32 tapitrisa tapitrisa tapitrisa tapitrisa tapitrisa tapitrisa tapitrisa tapitrisa dolara amerikana) i Wolfsburg noho ny Džeko Robinhony £ 32.5 tapitrisa (€ 42.5 tapitrisa) miala ny Real Madrid amin'ny 2008. Ny ambiny, araka ny filazany, ankehitriny dia tantara.
FACT CHECK: Misaotra ny famakiana ny tantaram-pitiavan'i Edin Dzeko momba ny tantaram-pitiavana sy ny zava-misy marina momba ny zavakanto. amin'ny LifeBogger, dia miezaka izahay mba hahatontosa ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mijery ity lahatsoratra ity ianao dia mametra ny fanamarihanao na Mifandraisa aminay!.
Jerome Boateng tantaram-pahaterahana ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra momba ny tantaram-piainana